यो रेस्टुरेन्ट, क्याफे, बोट उत्पादन संरचना संग तातो र चिसो व्यञ्जन को तयारी को लागि canteens विशेष कोठा तोकिएको छन्। यी उद्देश्यका लागि कम शक्ति बिरुवाहरु मा समग्र निर्माण ठाउँ केही ठाउँ हुन्। यस लेखमा के बोट सुन्दर हेर्न हुनेछ।
विविधता Fed चिसो प्लेट अनुसार उद्यमी प्रकार र वर्ग संग गठन। मेनु समावेश:
चिसो व्यञ्जन (बाढी, उसिनेर, भरी, तला, र यति मा।)।
उम्दा उत्पादनहरु (माछा, मासु)।
लैक्टिक एसिड उत्पादनहरु।
डेसर्ट र पेय (फल पेय, जेली, mousse, जेली र यति मा।)।
कम से कम 15 व्यञ्जन - पहिलो वर्ग रेस्टुरेन्ट मेनु दैनिक र उच्च दस भन्दा कम समावेश गर्नुपर्छ। अनुसार स्टोर खाना पकाउने, बिक्री क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिएको छ जो भइरहेको, साथै कफी पसल र अन्य कारोबार पठाउन दायरामा, संग उत्पादन कार्यक्रम गठन गरिएको छ।
चिसो कार्यशाला: विवरण
नियम, यो उज्ज्वल कोठा मा राखिएको छ। यसको Windows सामान्यतया उत्तर-पश्चिम वा उत्तर निर्देशित छन्। तातो र चिसो दोकान आरामदायक सम्बन्ध हुनुपर्छ। यो एक गर्मी उपचार गर्न उत्पादनहरु को वितरण को लागि आवश्यक छ र तिनीहरूलाई फिर्ता पकाउने गर्न प्राप्त। साथै, चिसो दोकान को लुगा धुने र वितरण लाइन बाट सन्देश हुनुपर्छ। कोठा आवश्यक सुरक्षा उत्पादनहरु र पकाएको उत्पादनहरु प्रदान गरिएको छ जो, उपकरण को रकम प्रदान। कारण उत्पादन मुख्य रूप काटन उपकरण प्रयोग गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ। चिसो पसलमा जो व्यवस्थापन र सबै प्रक्रियाहरू नियन्त्रण बाहिर वहन जिम्मेवार विशेषज्ञ छ।
चिसो बोट को काम को संगठन यसको सुविधाहरू आधारित गरिनेछ। विशेष उत्पादनहरूमा retransmission खाना पकाउन र portioning पछि उपचार हीट subjected छैन। यो जडान मा सेनेटरी नियमहरूको सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। चिसो भान्सा कुक, साथै, राम्रो व्यक्तिगत स्वच्छता पालन गर्नुपर्छ। भाँडा छोटो समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो मात्रा मा तयार हुनुपर्छ। काँचो माल उत्पादन, गर्मी उपचार, आवश्यक कडाई मासु र माछा उत्पादन भेद पास जो गरेका छैनन्, पकाएको र कच्चा तरकारी प्रयोग भन्ने तथ्यलाई दिइएको। सानो क्षमता को उद्यम मा विश्वव्यापी ठाउँ छन्। त्यहाँ उत्पादन कार्यक्रम को एक क्रमिक पकाउने छ। ठूलो उद्यम मा चिसो दोकान को काम को संगठन विशेष क्षेत्रहरूको सिर्जना पनि समावेश छ।
को दोकान प्रतिस्थापन तंत्र संग एक चिसो सार्वभौमिक ड्राइव संग सुसज्जित हुनुपर्छ। तिनीहरूले डिजाइन:
slicing पकाएको र कच्चा तरकारी;
निकाल्दा विभिन्न फल देखि रस;
तर, mousses, Sambuca, खट्टे क्रीम whipping;
सलाद र अन्य ड्रेसिङ मिश्रण।
यी बहुमुखी मिसिन ठूलो परिमाणमा खाना पकाउने मा बिरूवा सुन्दर स्थापित। सानो उद्यम मा, नियम यस्ता सञ्चालन बाहिर स्वयं लगे छन्। स्यान्डविच को एक ठूलो विविधता संग, उम्दा उत्पादनहरु सानो उपकरण र उपकरण प्रयोग। यी उपकरणहरू विशेष, काटन र पनीर, ससेज, छम, रोटी कोठा, हात maslodelitel को स्ट्याकिङ लागि मिसिन समावेश गर्नुहोस्।
कम तापमान एकाइहरु
को वितरण लाइन मा दिइँदैन खाना को तापमान, 10-14 डिग्री नाघ्नु हुँदैन। यो बोट जडानमा प्रशीतन उपकरण को पर्याप्त रकम संग सुसज्जित गर्न छ। तयार बनाएको भाँडा र उत्पादनहरु जो देखि उनि विशेष मंत्रिमंडलों प्रयोग गरिन्छ, भण्डारण लागि। साथै, काम बाहिर चिसो पसलमा उत्पादन टेबल मा कम तापमान मंत्रिमंडलों संग लगे छ। तिनीहरूले वर्तमान हो: क्षमता र सलाद लागि स्लाइड। छोडेर कम तापमान काउन्टरहरू प्रयोग आइसक्रिम भण्डारण गर्न। चिसो पेय को निर्माण मा पछि प्रयोगको लागि बरफ को लागि, बारहरू र रेस्टुरेन्ट विशेष बरफ मिसिन मा ककटेल प्रयोग गरिन्छ। उपकरण को विकल्प उत्पादन क्षमता, उत्पादन समाप्त र उत्पादनहरु कि भण्डारण गर्न आवश्यक संख्या मा निर्भर गर्दछ।
टेबल को संख्या कार्यस्थल मा रहेको एकै समयमा संख्या मा निर्भर गर्दछ। यस मामला मा, चिसो दोकान योजना प्रत्येक कर्मचारी ठाउँ कम्तिमा एक र आधा मीटर थियो भनेर माथि कोरिएका गर्नुपर्छ। साग को लुगा धुने, तरकारी, फल बाहिर मोबाइल वा स्थिर स्नान मा लगे। यी उद्देश्यका लागि, यो पनि एक मड्यूलर तालिका सुसज्जित एक निर्मित मा लुगा धुने खण्ड संग रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पादन समाप्त को बोध पठाउनु अघि मोबाइल रैक मा राखिनेछ। रेस्टुरेन्ट मा, चिसो दोकान एक वितरण काउन्टर संग सुसज्जित छ।
तिनीहरूलाई बिना चिसो दोकान को विशेषताहरु अपूरो हुनेछ। जब प्रयोग विभिन्न उपकरणहरू खाना पकाउने, उपकरण, औजार:
चक्कु (मासु,: काटन छम, घिउ, पनीर, sausages, चक्कु-काँटा; घुम्रेको; सेफ तीन)।
तेल लागि खुरचनी।
mousses, जेली, aspic लागि प्रकारका।
उपकरण तह लागि।
स्थानहरू निर्माण सिर्जना
चिसो दोकान रेस्टुरेन्ट वा अन्य व्यवसाय नाश्ता र भोजन उत्पादन लाइनहरु को एक विस्तृत श्रृंखला संग आफ्नो तयारी लागि विनियोजन छन्। तिनीहरू केही स्थानहरू छन्:
उत्पादन सलाद र अन्य ड्रेसिङ।
मासु माछा र मासु उत्पादन काटन।
Portioning र भोजन को प्रस्तुति।
भिजेको-उत्पादन, सूप, मीठो पेय, स्यान्डविच को उत्पादन।
कार्यस्थल मा, सलाद र तयारी अन्य सलाद वा तालिकाको लागि हरियो ताजा तरकारी धोइदिनुभएर लागि एकीकृत जलाशय संग टब प्रयोग। कच्चा र पकाएको खाद्य पदार्थ काटन संग फरक काटन बोर्ड मा बाहिर छ चक्कु सेफ स्त्रिहरु।
चिसो दोकान को विशेषताहरु: विशेष गरी खाना पकाउने
सबै ठाउँ खण्डहरू विभाजित हुनुपर्छ। कार्यस्थल दुई उत्पादन टेबल संग सुसज्जित छ। तिनीहरूलाई को एक लगे छ , तरकारी slicing घटकहरुलाई मिश्रण र सलाद र अन्य ड्रेसिङ भर्नु। यो तालिका modulated वा शाखागत सामान्य गर्न सकिन्छ। अन्य portioning मा बाहिर छ र व्यापार तल्ला मा पछि बिक्री को लागि सलाद को निरूपण। यी उद्देश्यका लागि, यो कम तापमान मन्त्री संग एक modulated dissecting तालिका किन्न उचित छ। उहाँले ब्यालेन्स सही एक कचौरा एक पकवान तयार, portioning लागि उपकरण नाप्ने (सलाद उपकरणहरू shovels, चम्मच) सेट। बायाँ तालिका मा appetizers, सलाद र अन्य व्यञ्जन लागि प्लेट राखे। यो पनि अवकास उत्पादनहरु बाहिर। यो तयारी सजावट रूपमा प्रयोग उत्पादनहरु बनाए। यो उसिनेर अन्डा, टमाटर, कागति, कार्रोप्नेट, जडीबुटी र यति मा काटन समावेश छ। यो उद्देश्य, विशेष उपकरण र उपकरण लागि। तयार उत्पादनहरु जमाई खण्डहरू भण्डारण गरिएको छ।
मासु उत्पादन र नाश्ता
आफ्नो तयारी को साइट मा बाहिर छन्: काटन, portioning र माछा र मासु उत्पादन देखि व्यञ्जन दर्ता। यहाँ, साना यंत्रीकृत उपकरण लागि टेबल सेट। मार्गदर्शन काटन चक्कु लागि मासु उत्पादन गरिन्छ। डेस्कटप साधन प्रयोग गरेर ठूलो अंश नियन्त्रण।
तिनीहरूले उत्पादन दायरामा समावेश छन् भने, आफ्नो निर्माण को लागि समर्पित ठाउँ संगठित गर्नुपर्छ। उबला र मासु उत्पादन काटन उत्पादन टेबल, सुसज्जित संग मा बाहिर छ:
जनता अंश नियन्त्रण गर्न वजन;
सेफ चक्कु triples;
पिकअप भारित उत्पादनहरु लागि ट्रे।
प्रशिक्षण उत्पादन बनाएको तयार भोजन गर्नुअघि। यो उद्देश्य लागि, काटन र carbonation लागि चक्कु आकार, विभिन्न आकार र यसको अगाडी को recesses। माछा र मासु भाग को तयार धूपदान, आकार, पकवान, त्यसपछि सजाया विशेष चम्चा खन्याउन प्रयोग उत्पादनहरु मा राखिनेछ। समाप्त उत्पादन एक कम तापमान मन्त्री मा राखिएको छ। को फिलर को ट्रे मा तयार गरिएको छ भने, छुट्टी निर्मित यो अंश मा कटा। तिनीहरूले पछि विशेष प्लेट र अन्य tableware गर्न पारी। यो विशेष ब्लेड लागि प्रयोग।
तिनीहरूले कफी पसल र यति मा सबै भन्दा लोकप्रिय चिसो व्यञ्जन, विशेष गरी विद्यार्थी, विद्यालय canteens, मनोरञ्जन क्षेत्रमा एक मानिन्छ। रोटी बनाइएका सैंडविचेस। यो तेल र विभिन्न मासु उत्पादनहरु, पाक उत्पादनहरु प्रयोग गर्दछ। एक सामान्य नियम रूपमा, खुला स्यान्डविच पकाउन। परिवहन विभिन्न मोड को यात्रु सेवा कम्पनीहरु, बन्द (सडक) नाश्ता उत्पादन। banquets र receptions लागि canapés तयार।
अंश मा एक कटा रोटी स्यान्डविच, र विभिन्न उत्पादनहरु तयार मा एक प्रमुख प्रक्रिया। तिनीहरूले पनि साग, तरकारी, जैतून, कागति र यति मा संग सजाया छ। जब रोटी उत्पादनहरु slicing स्यान्डविच को बोध एउटा सानो मात्रा र एक मार्गदर्शन विधि द्वारा। यो पनीर, उम्दा, रोटी चक्कु, साथै विशेष उपकरण प्रयोग गर्दछ। स्यान्डविच को एक ठूलो संख्या को तयारी मा यंत्रीकृत उपकरण डेस्कटपमा स्थापित छ।
को मार्गदर्शन प्रयोग maslodelitel को भाग मा तेल को वितरण गति गर्न। विशेष सजावट scrapers प्रयोग गरिन्छ। एक विशेष आकार (एक फूलको दल, गुलाब को रूप मा, र यति मा।) आफ्नो मद्दत तेल दिन। काटन उपकरण बाहेक काटन र टेबल मा खाना slicing, लागि, बोर्ड उपस्थित हुनुपर्छ। अनुसार प्रशोधन सामाग्री संग आफ्नो चिन्ह। स्यान्डविच लागि प्रयोग उत्पादन, कार्यान्वयनको सुरु गर्नु अघि 30-40 भन्दा मिनेट छैन तयार पारे। आफ्नो भण्डारण कम-तापमान मंत्रिमंडलों गरिन्छ। खाजा स्यान्डविच (settee) को उत्पादन एकदम laborious मानिन्छ। तिनीहरूले बुफे तालिका मा राख्दै, receptions, banquets मा मुख्य रूप खुवाइन्छ। विभिन्न recesses विनिर्माण प्रक्रिया बढाउने प्रयोग गरिन्छ।
तिनीहरूले गर्मी मौसम मा ठूलो मांग गर्दै छन्। लागि चिसो सूप hodgepodge, चुकंदर सूप, सकरखण्ड र यति मा समावेश गर्नुहोस्। तिनीहरूले तरकारी र चुकंदर शोरबा अन्य उत्पादन, रोटी kvass, र फल बनाइएका छन्। भाँडा 12-14 डिग्री गर्न chilled जारी। कार्यान्वयन गर्दा खाद्य बरफ, बरफ निर्माता द्वारा उत्पादित छ जो प्रयोग कायम गर्न।
मासु र अन्य खाद्य पदार्थ, तरकारी, सूप को तयारी को लागि चिसो आवश्यक, एक हट पसलमा उपचार गर्मी छ। त्यसपछि उनीहरू cooled र स्ट्रिप्स वा सानो घन मा कटौती छन्। यो स्वयं वा विशेष यंत्रीकृत काटन उपकरण प्रयोग गरेको छ। चक्कु संग कटा र रस सम्म एउटा सानो रकम मा नुन संग एक काठ pestle संग triturated धनुष। खाना पकाउने ककडी खुली र स्वयं वा मिसिन द्वारा कटौती अघि।
निर्माण मीठो फल सूप broths मा बाहिर छ। यी व्यञ्जन आधार रूपमा सुकेको वा ताजा जामुन र फल हो। गर्मी अघि उपचार तिनीहरूलाई क्रमबद्ध र colander वा strainer प्रयोग धोए। को जामुन फारम प्रयोग गरिन्छ, नाशपाती, स्याउ तरकारी slicers मा कटौती। यस पूर्व। एक विशेष उपकरण हटाइएको बीउ स्लट को मदद संग, भाँडा पास्ता, चामल र यति मा संग दिइँदैन छन्। गर्म पसलमा पकाएको मीठो सूप लागि फल garnishes र decoctions।
यी समावेश जेली, जेली, sambuca, mousses, आदि कार्यस्थल, यी व्यञ्जन को तयारी स्नान, औद्योगिक टेबल, सुसज्जित एक कम तापमान मन्त्री संग स्थापित छ लागि, मात्रा (tabletop)। साथै, यो उपकरण, सामूहिक मात्रा, tableware, विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गर्दछ। विभिन्न अपरेसन प्रतिस्थापन तंत्र संग सार्वभौमिक ड्राइव छन् प्रदर्शन गर्न। उदाहरणका लागि, यो mousses whipping, तर, जब फल दल्नु प्रयोग गरिन्छ।
खाना पकाउने लागि आवश्यक उत्पादन, क्रमबद्ध र colander पानी चलिरहेको अन्तर्गत धोए। जामुन र फल को क्रीम, दूध, चीनी यसको प्राकृतिक फारममा दिइँदैन गर्न सकिन्छ। ताजा रस गरिएका gelled व्यञ्जन तयारी। विशेष उपकरण र उपकरणहरू प्रयोग गरेर यसलाई प्राप्त गर्न। गर्म पसलमा उत्पादन syrups खाना पकाउने। समाप्त उत्पादन ट्रे, प्रकारका मा हालिएको छ। हटाउन सकिने ड्राइव को लागि एक सार्वभौमिक संयन्त्र द्वारा मार mousses लागि syrups। मिठाई प्लेट वा बरफ-क्रीम कटोरे बनेको तयार भोजन को प्राप्ति।
पेय र compotes तातो दोकान उत्पादन गर्न उत्पादन (कूल्हों, Cranberry, कागति देखि, आदि) स्वामित्व र त्यसपछि cooled। त्यसपछि उनीहरू अंश विभाजित छन् (को चश्मा मा हालिएको)। एक विशेष उपकरण प्रयोग गरेर ताजा स्याउ देखि पेय पदार्थ को तयारी को लागि। यो उपकरण एकल आन्दोलन बीउ स्लट हटाउँदछ र 6-8 स्लाइस मा फल विभाजन छ। सार्वजनिक खानपान को ठूलो उद्यम मा नरम आइसक्रिम को तयारी को फ्रीजर प्रयोग बाहिर। अल्पकालीन भण्डारण र कम तापमान खण्ड वा काउन्टर मार्फत उत्पादनहरु को बिक्री। को आइसक्रिम fillers वा प्रकारको धातु छुट्टी kremanki बनेको छ। विशेष चम्मच द्वारा Portioning।
एक चिसो दोकान समकोण परिभाषित लागि आधारभूत आवश्यकताहरू। उत्पादन मोड उद्यम को विशेष आधारमा सेट गरिएको छ। 11 घण्टा भन्दा बढी परिवर्तन को अवधि, dvuhbrigadny अपनाए थियो भने, कदम वा ग्राफ संयुक्त। उत्पादन स्थान को सामान्य व्यवस्थापन जिम्मेवार अधिकारी वा फोरमैन प्रदान गर्दछ। यसलाई खडा रूपमा कुक चिसो45 वा छुट्टी दोकान। मेनु अनुसार उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्न फोरमैन योजना गतिविधिहरु।
पकाउने समय-खपत व्यञ्जन साँझ गरेको। यी उदाहरणका लागि, बाढी, जेली, compotes, जेली र यति मा समावेश समावेश। चयन गरिएको उपकरण, बर्तन को परिवर्तन को सुरुमा प्रशिक्षण समयमा, उत्पादन अर्डर अनुसार उत्पादन वितरण। जब काम को तर्कसंगत संगठन, यो 20 मिनेट भन्दा कुनै लाग्छ। विशेषज्ञहरु अनुसार यस योग्यता संग काम प्राप्त। फोरमैन दुवै चिसो पसलमा सुरक्षा, पकाउने को प्रविधि पालना सुनिश्चित गर्दछ। उहाँले पनि ग्राहक सेवा मा रुकावट रोक्न उत्पादन प्रक्रियाको निरन्तरता लागि जिम्मेवार छ। उत्पादन को एक ठूलो आवाजमा कम्पनीहरु मा श्रम सञ्चालनका विभाजन शुरू गरिएको छ। यो खाता योग्यता मा लिन्छ।
ढेर-ड्राइभिङ मिसिन: सञ्चालन सिद्धान्त, विनिर्देशों, फोटो, यन्त्र। जम्मा मिसिन को प्रकार
McDonalds मा जस्तै ग्रामीण मा रुचि आलु,? त्यसपछि यो लेख तपाईं को लागि छ
एनिस्मिभले कुन पुस्तकहरू लेखे? Anisimov आन्द्रे द्वारा किताबहरु
जवान बालबालिकाको लागि Allergenic खाद्य पदार्थ
भिटामिन ए (retinol एसीटेट): गुण र आवेदन